Tag Archive for "ओली" - शक्ति केन्द्रको चेपुवामा ओली र प्रचण्ड
काठमाडौं । कम्युनिष्ट भन्ने वित्तिकै अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न नसक्ने दर्शन । कार्ल माक्र्सले लेखेको द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद होस् वा माओत्सेतुङको साँस्कृतिक क्रान्ति नै किन नहोस् , जहाँ सबै अटाउन सक्ने अवस्था रहन्न । त्यसको नेपाली संस्करणका रुपमा कुनै बेला उदाहरण थिए केशरजंग रायमाझी । जब कम्युनिष्ट जुट्ने अवस्था आउँथ्यो , उनी पुगिहाल्थे भाँजो हाल्न । त्यसैले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एक्लो र सग्लो... थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । जताततै कर लगाएर राजश्वमुखी नीति अख्तियार गरेको केपी ओली सरकारको अर्थतन्त्र धरापमा पर्न थालेको तथ्यांकहरुले नै एकपछि अर्को रुपमा पुष्टि गर्न थालेको छ । व्यापार घाटा चुलिएको छ भने तीन हजारभन्दा बढी बस्तुमा शुन्य भन्सार सुविधा दिदाँपनि चीनतर्फको निर्यातमा भारी गिरावट आएको छ । दिनप्रतिदिन आयातमा भारी बुद्धि हुदै जाने तर निर्यात खुम्चिदै जादाँ देशको व्यापार सन्तुलन खलबलिन थालेको हो । नेपा... थप पढ्नुहोस्
यसरी डुब्दैछ मोदीसँगै ओलीको 'समृद्धि 'जहाज नेपाल बहस डेस्क । विधानसभा चुनावमा व्यहोरेको हारलाई भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पतनका रुपमा हेरिएको छ । भारतका पाँच वटा प्रदेशमा भएको चुनावमा मोदीको भारतीय जनता पार्टी दोश्रो स्थानमा छ भने कांग्रेसले सबै ठाउँमा जित सुनिश्चित पारेको छ । छत्तीसगढमा त झन् मोदीको पतन नै भइसकेको विश्लेषण भइरहेको छ । ठूलो अन्तरमा भाजपा पछाडी परेपछि मोदीको प्रधानमन्त... थप पढ्नुहोस्
नेपाल बहस डेस्क । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगे । गत महिना उनी अमेरिका मात्रै पुगेनन् । उतैबाट कम्बोडियाको भ्रमण गरेर आए । कमै नाम सुनिएको र नेपालले खासै फाइदा लिन नसक्ने देशको भ्रमणमा ओली किन पुगे ? भनेर धेरैले चाँसो राखे । तर सही जवाफ भेट्न मुश्किल भयो । अहिले थाहा हुदैछ, झण्डै तीन दशक यता कम्बोडियामा तानाशाही सत्ता लादेका प्रधानमन्त्री हुन सेन काठमाडौ... थप पढ्नुहोस्
काठमाडौँ । एसिया प्यासिफिक समिटमा युनिफिकेसन चर्चाकी प्रमुख हक जा हनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनकी पत्नी राधिका शाक्यसहित १५ सय उच्च पदस्थ नेपाली दम्पतीलाई आशीर्वाद दिने तयारी छ । कान्तिपुरलाई प्राप्त सूचीमा समिटको दोस्रो दिन आइतबार ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मेयर, नेता र शिक्षकको दम्पतीलगायतलाई चर्चकी गुरुआमाले आशीर्वाद दिने’ उल्लेख छ । तर प्रधानमन्त्री ओली हिन्दु परम्परालाई महत्वपूर्... थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको नौ महिनापछि कार्यप्रगतिको समीक्षा गर्न बैठक बस्न लागेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मंसिर ५, ६ र ८ गते बैठक बोलाएको छ तर सिंहदरबारमा हुने सो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी हुने नहुने अनिश्चित छ । प्रधानमन्त्री अ‍ोली एक महिनादेखि सरकारी कार्यालय सिंहदरबार गएका छैनन् । मुलुकको कार्याकारी प्रमुखको भुमिमा रहेका ... थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा उलेख्य सुधार आएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जनाएका छन् । छातीको सङ्क्रमण, ज्वरो र खोकी नियन्त्रणमा नआएपछि गत सोमबार महाराजगञ्जस्थित त्रिवि, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना भएका प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा थप सुधार आएको उपचारमा टोलीका संयोजक प्रा डा अरुण सायमीले जानकारी दि... थप पढ्नुहोस्
नेकपाको चियापान : भृकुटीमण्डपमा सबैलाई निम्ता !
काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दशैँ तिहार र छठ विशेष चियापान कार्यक्रम शनिबार हुदैछ । भृकुटीमण्डपमा दिउँसो १२ बजेदेखि सबैलाई चियापानका लागि सबैलाई निम्तो गरिएको नेकपाका नेताहरुले बताएका छन । चियापानमा नेतादेखि नागरिक कार्यकर्ता र उच्च पदका व्यक्तिलाई समेत निम्ता गरिएको छ । बेलुकी ५ बजेसम्म चल्ने चियापनमा नेताहरुबीच प्रत्यक्ष भेटघाट, गफगाफ लगायत दृश्य देखिनेछन । चियापानका लागि नेकप... थप पढ्नुहोस्